Gurman anofanotaura kubatanidzwa kwakawanda uye mapurogiramu matsva muIOS 16 | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 16/05/2022 16:00 | iOS 16, Noticias
Kwasara mavhiki mashoma kusvika kutanga kwe WWDC22, chiitiko chikuru chegore chevagadziri veApple. Muchiitiko ichi tichaziva nhau dzese nezve masystem matsva eapuro hombe: iOS 16, watchOS 9, tvOS 9 uye zvimwe zvakawanda. Iye zvino yave nguva yekufungidzira kuti ndeapi mabasa atinotarisira, ndeapi makuhwa akanzwika zvakanyanya mumazuva achangopfuura uye, pamusoro pezvose, ndeapi akavimbika. Maawa mashoma apfuura, muongorori anozivikanwa uye ane mukurumbira Mark Gurman akataura izvozvo iOS 16 ichaunza maapp matsva eApple uye nzira nyowani dzekudyidzana neiyo inoshanda sisitimu. Chii chinonzi Apple kumusoro?
iOS 16 inogona kusanganisira itsva Apple apps
Kune akawanda makuhwa arikuonekwa akatenderedza iOS 16 mumwedzi ichangopfuura. Zvinotarisirwa kuti iyi itsva inoshanda sisitimu haizosanganisire shanduko huru mukugadzira. Zvakadaro, Apple ichavandudza kudyidzana kwevashandisi neiyo inoshanda sisitimu uye ichaunza mamwe ekuvanzika maficha nekuwedzera maficha akabatanidzwa muCloud +.
Aya makuhwa akawedzera uye akawedzera kusimba kuvonga kune ruzivo rutsva kubva kune anozivikanwa muongorori we Bloomberg Mark Gurman. Muongorori anoti Apple ichaunza zvitsva zvepamutemo zvikumbiro iyo yekubatsira mushandisi kuwedzera ruzivo rwavo muIOS. Uyezve, ichavandudza kudyidzana kwevashandisi neiyo inoshanda sisitimu kuburikidza nenzira itsva dzekudyidzana.
Hazvina kutsanangurwa kuti idzi nzira dzekudyidzana ndedzipi, asi isu tine chokwadi chekuti dzichange dzakanangana, kana zvimwe zvacho, kuvandudza kudyidzana nemajeti. Widgets inomira uye inongoratidza ruzivo. Zvichida iOS 16 inokutendera kuti udyidzane navo kuitira kuti uve nechokwadi chekuti havangope ruzivo chete asiwo vanodzora sisitimu yekushandisa kubva pachiratidziri chekumba.
Gurman anotarisirawo kuti nhau dziri muwatchOS 9 dzichave dzakanyanya kukosha, kunyanya dzakanangana nekuvandudzwa kweHutano uye mukutarisisa basa remushandisi. Ngatiyeukei kuti zvitsva izvi zvichapa kune ramangwana Apple Watch Series 8 iyo ichaona mwenje muhafu yechipiri ya2022.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 16 » Gurman anofanotaura kubatanidzwa kwakawanda uye mapurogiramu matsva muIOS 16